US / 32A (7.6KW) Mpanamboatra sy mpamatsy | China US / 32A (7.6KW) Factory
Type 1 Haavo 2 Wall-Charger Wall Car Charger Wall miaraka amin'ny fankatoavana ETL
Factory mivantana China EV Charging Point, EV Charging Infrastructure, miaraka amin'ny tanjon'ny "zero defect". Mikarakara ny tontolo iainana, sy ny fiverenana ara-tsosialy, hikarakara ny andraikitra ara-tsosialin'ny mpiasa ho adidinao manokana. Miarahaba antsika namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hitsidika sy hitarika anay hahafahantsika miaraka manatratra ny tanjona mandresy. Ny tanjonay dia ny hampivelatra vokatra mamorona ho an'ny mpanjifa manana traikefa tsara ho an'ny OEM / ODM Manufacturer China EV Charger.
Manome toeram-piantsenana famakiana fiara mifono vy amin'ny varotra OEM miaraka amin'ny ETL Certificate
Famatsiana OEM China Car Charging Station, Fast Charging, Miezaka mafy izahay mba hanana hatsarana, fanatsarana tsy tapaka ary fanavaozana, dia manolo-tena hahatonga anay ho "fahatokisan'ny mpanjifa" sy "mpamatsy voalohany ny marika ho an'ny kojakoja enti-mandeha injeniera". Safidio izahay, mizara toe-javatra mandresy!
ETL 7.6kw AC EV Charger Miaraka amin'ny Ocpp1.6J sy Plug Type 1
Tsara kalitao China EV Charger, Car Charger, Miaraka amin'ny serivisy ambony sy miavaka, novolavolaina tsara izahay miaraka amin'ny mpanjifanay. Amin'ny fampiasana rafitra fitantanana kalitao tsara sy siansa feno, kalitao tena tsara ary finoana avo lenta, mahazo toerana tsara izahay ary mibodo io fifehezana io ho an'ny kalitao tsara China 32A Type1 SAE J1772 EV Charger. Ny fahaizana sy ny fahalalana dia manome antoka fa nankafy hatrany ny fahatokisana avy amin'ny mpanjifantsika izahay tamin'ny asa aman-draharahanay. Ny «kalitao», «ny marina» ary ny «fanompoana» no fototray. Ny fahatokianay sy ny fanolorantenanay dia mijanona am-panajana amin'ny fanompoana anao. Mifandraisa aminay anio raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa aminay izao.
Jereo hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny vokatra mivoatra avy amin'ny fiaraha-miombon'antoka mahasoa ny trano, ny toeram-piasana, ary ny toeram-bahoaka hafa. Ny famandrihana haingana azo antoka dia mety amin'ny EV rehetra. Ny fampiasana ny plug J1772 manerantany dia miasa miaraka amin'ireo EV & Plug-In Hybrid any Etazonia sy Kanada rehetra ny mpamily fiara elektrika. Anisan'izany ireo maodely malaza toa ny, Chevy Bolt, Nissan Leaf, Ford Fusion, BMW i3, Chevy Volt, Toyota Prius, Chevy Spark, Jaguar I-Pace ary Audi e-tron. Na Tesla aza mampiasa ny adapter mahazatra.